Madio sy kilasika: miala sasatra amin'ny sauna Finnish
Manao ahoana ny fahasalamana amin'ny fitsidihana ny sauna failandey?
Fantatry ny ankamaroan'ny olona fa tany Failandy no niavian'ny sauna. Na izany aza, vitsy dia vitsy amin'izy ireo no mahalala ny fahasamihafana misy eo amin'ny sauna finnish tany am-boalohany sy ireo karazany izay fahita eto. Azonao atao ny mahita hoe maninona ny sauna Finnish no miavaka sy mahasalama antsika ato amin'ity lahatsoratra manaraka ity.
Sauna Finnish ho anisan'ny kolontsaina sauna Skandinavianina
Eto amin'ity firenena ity, matetika ny fampidirana fofona manitra no entina amin'ny sauna: ny menaka esansiela dia mahatonga ny fivoriana sauna ho traikefa nahafinaritra tokoa ho an'ny olona maro. Na izany aza, tsy mitranga akory izany amin'ny sauna failandey taloha. Any amin'ny firenena Skandinavianina, samy mankafy ny sauna hazo mahazatra ny tanora sy ny be taona. Ampiasaina voalohany amin'ny fanadiovana ara-batana sy ara-tsaina.
Sauna Finnish - © AboutLife / Adobe Stock
Any Failandy, ny fandehanana any Sauna dia saika misy fombafomba momba azy: ny fifantohana dia ny fahanginana, ny fialan-tsasatra ary ny fahafinaretana amin'ny hafanana - fifampiresahana mafy dia fady tanteraka ao amin'ny efitrano sauna. Ny fampidirana alikaola, toy ny matetika anaovana labiera any Alemana, dia tsy misy any Failandy. Na eo aza izany, maro ny finoa no te hitady ny tenany amin'ny cider mangatsiaka aorian'ny fotoan'ny sauna.
Any Failandy, ny fanasana mankany amin'ny sauna dia heverina ho zavatra mendri-kaja indrindra ary lazain'ny mpiara-miasa aminy mihitsy aza. Tokony ho fantatry ny mpitsidika vahiny noho izany fa ny fandavana haingana loatra dia matetika no tsapa ho tsy fankasitrahana.
Any Failandy ianao dia tsy mitafy lamba amin'ny ankapobeny rehefa mandeha any amin'ny sauna. Ny fanapahan-kevitry ny orinasa tena zava-dehibe dia noho izany dia azo atao kokoa amin'ny fivoriana ofisialy. Fa kosa, ny mandeha miaraka amin'ny sauna dia manapaka ny ranomandry ary mamorona fifandraisana manokana eo amin'ny olona. Tsy fahita any Failandy ny fananan'ny orinasa fitaovana miaraka amin'ny sauna azy ireo, izay azon'ny mpiasa aleha indraindray.
Eto amin'ity firenena ity, ny kolontsaina sauna dia nahitana ampahany betsaka: ny mozika atmosfera, ny lalao miova loko ary ny hanitra manitra dia miantoka karazan-karazany marobe amin'ny sauna. Na izany aza, izany rehetra izany dia tsy ekena any Failandy. Eto ny sauna dia tsotra, mahitsy ary matetika tsy dia mirehitra akory. Fady ny mozika ary manitra no maningana tsy ankanavaka. Ny ankafizin'ny Finn maro anefa dia ny hanitra manitra avy amin'ny hazo birch vaovao. Ny ao anaty tranon'ny sauna dia vita amin'ny hazo manontolo, izay afaka mifoka hamandoana ary mamoaka azy indray.
Ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny sauna failandey dia ny kiuas - ity no heater an'ny sauna, izay rakotra vato lehibe kokoa ary manafana ny efitrano hatramin'ny 105 ° C. Eo ho eo, ny hamandoana ao an-kabine dia eo anelanelan'ny 2 sy 5%. Raha misy fampidirana vaovao dia mitombo mandritra ny minitra vitsy.
Zavatra tsy manam-paharoa amin'ny kolontsaina sauna any Finlandia ny fampiasana rantsankazo birch mifatotra anaty fehezam-boninkazo. Tsy apetraka eo ambony fatana anefa izy ireo fa zatra mandatsa-dra ny hoditra. Nokapohinao moramora ny ranjonao sy ny tananao hampiakatra ny rà mandriaka, nefa miaraka amin'izay koa dia miparitaka ao anaty tranony ny fofona mahery. Raha ny rantsana birch vaovao misy ravina dia ampiasaina amin'ny volana fahavaratra, ravina maina kosa ampiasaina amin'ny ririnina. Any Failandy, ny bouquets dia azo vidiana efa voafatotra amin'ny fivarotana manokana.
Zava-dehibe ny manondraka ireo rantsankazo birch amin'ny rano mafana alohan'ny hampiasana azy ireo mba hihalefaka kely izy ireo ary tsy hanimba ny hoditra. Ny rano birch dia tsy tokony hatsipy fotsiny: manondraka manitra ho an'ny fatana izy avy eo.
Ny hatsembohana amin'ny maripana ambony dia tsy ny fandehanan'ny rafi-piasan'ny hozatra ihany fa ny vokany manadio sy manadio. Ny polutants dia esorina mora kokoa amin'ny alàlan'ny hoditra, ary ny vovo-koditra sebum sy ny hoditra maty koa dia afaka mamaha. Aorian'ny sauna dia omenao fitsaharana ny vatanao ary avy eo mandro tsara ianao.
Fanorana ao an-trano | Wellness
Mazava ho azy miaraka amin'ny kosmetika voajanahary | Fahasalamana ara-batana
Fanatsarana tarehy voajanahary | Fahasalamana ara-batana
Tsy misy fanaintainana amin'ny alàlan'ny fanorana | Wellness
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. Desambra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy fahasalamana, WellnessKeywords Sauna finlandey, mandehana any amin'ny sauna, Sauna, maka sauna
indray Lahatsoratra taloha: Fitaovana ao an-trano
more Lahatsoratra manaraka: Fiaraha-miasa - mandrosoa miaraka amin'ilay mpiara-miasa